कहिलेकाहीं बाल्यकाल शब्द देखि परिचित अचानक अन्धो गल्ली मा राख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, कुम्मैत। तनाव धेरै प्रश्न हुन्छ। कसरी सही उच्चारण गर्न - वा कुम्मैत कुम्मैत?
संयंत्र को इतिहास
कुम्मैत - अनाज को नजिकको नातेदार। उहाँले परिवार Polygonaceae पर्छ र subfamily Polygonoideae मा समावेश गरिएको छ। Rumex acetosa, वा कुम्मैत - बिरुवाहरु को ल्याटिन नाम।
यो shrub बारेमा एक मीटर को एक उचाइ पुग्नु। यसको नाम ल्याटिन देखि अनुवाद "भाला।" र साँच्चै, लोचदार स्टेम सानो फूल, प्राचीन हतियार समान को panicles समाप्त कुम्मैत। पनि पात पनि भाला को आकार सदृश उपस्थिति मा oblong छन्।
पहिले नै प्राचीन समयमा हामी यो बोट लाभकारी गुण थाह थियो। युनानी र रोमी यो एक दबाइ रूपमा प्रयोग। खाना पहिलो पटक यो फ्रान्स प्रयोग गर्न XII शताब्दीमा थाले। को XIV शताब्दीमा, युरोप मा विपत्ति को महामारी समयमा, कुम्मैत रोग विरुद्ध सुरक्षा एजेन्ट रूपमा प्रयोग भएको थियो। रूस लागि जाँदा, त्यहाँ अन्य देशहरूमा भन्दा पछि खाएको गर्न थाले। लामो समय को लागि उहाँले एक साधारण तान्नु छलफल भएको थियो। अब undoubted कुम्मैत को लाभ, साथै आफ्नो piquant अमिलो स्वाद यो लगभग हरेक षड्यन्त्र, घरेलु वा बगैचा मा उब्जाउ गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व गरेका छन्।
कुम्मैत (शब्द मा जोर धेरै मानिसहरूलाई एक असजिलोपन छ) "अमिलो" मतलब जो प्राचीन रूसी "shavn", यसका नाम छ। सबैभन्दा भाषाविद् शब्द "डक" सीधा रूसी भोजन को शीर्षक सम्बन्धित छ भन्ने विश्वास गर्छन् "सूप।" सेट बोट नाम को घटना को सही समय सम्भव छैन। सम्बन्धित शब्द पोलिस szczawa (कुम्मैत) छ।
Variability (र यो निःशुल्क छ) तनाव
हामी कसरी शब्द "डक" मा जोड राख्न बुझ्न जारी। रूसी भाषा सबैभन्दा संसारमा जटिल को छ। तर यो यो त्रुटिहरू बच्न बहाना छैन। यो एक विदेशी लागि स्वदेशी वक्ता क्षमा गर्न सकिन्छ, तर छैन। त्यसैले, कुम्मैत। तनाव धेरै पहिलो syllable छन्, र केही - दोस्रो मा। सबै भन्दा राम्रो विकल्प कस्तो हुने थियो? यहाँ हामी रूसी भाषा, उच्चारण variability कि सम्झना गर्नुपर्छ। यसलाई कुनै पनि syllable मा खडा गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीं उच्चारण समान विकल्प दिनुभयो।
विभिन्न शब्दांशहरू मा तनाव को विवरण शब्द फरक lexical अर्थ हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। कुरूप - उदाहरणका लागि, शब्द कुरुप पारी अर्को शैली गर्न जोड छ भने, तपाईंले एक नयाँ lexical अर्थ संग शब्द प्राप्त।
तनाव को नियामक र मान्य संस्करण
रूसी भाषा विकास र यसको वाहक साथ सँगै परिवर्तन र XX शताब्दीमा त्यहाँ ठूलो परिवर्तन भएको छ। उदाहरणका लागि, विभिन्न शब्दांशहरू केही शब्दमा उच्चारण चरणबद्ध स्वीकारे थिए। यो यस्तो घरेलु पनिर, सम्झौता, खोल र धेरै अरूलाई रूपमा शब्दहरू छोयो।
शब्द मा सही उच्चारण कसरी पाउन "डक"
आधुनिक रूसी केही शब्दहरू मा तनाव विभिन्न शब्दांशहरू राखिएको गर्न सकिन्छ भनेर स्वीकार्छन्। तथापि, सांस्कृतिक र शिक्षित व्यक्तिको रूपमा जानिन्छ, तपाईं मा जोर को शब्द सही (normative) छ "डक" के सम्झना गर्न आवश्यक छ। अक्सर colloquially यो शब्द मा जोर पहिलो syllable धारण छ। त्यसैले यो परिचित सही र सहज देखिन्छ। तर तपाईं रूसी भाषा कुनै पनि शब्दकोशमा भने, जवाफ नै छ - तपाईं सक्दैन। हामी नाम "कुम्मैत" विचार भने तनाव मात्र दोस्रो syllable अनुमति छ। अन्य सबै विकल्पहरू गलत विचार थियो।
शब्दकोश pronouncing सङ्केत गर्दै त्यहाँ शब्द उच्चारण को हुर्काउन शङ्का छन् भने सधैं, सहयोग गर्न तयार छन्। दोस्रो syllable मा - तिनीहरूले कसरी र monolingual शब्दकोश र हिज्जे कि शब्द सही उच्चारण "डक" देखाउँछ।
कुम्मैत, कुम्मैत: तपाईं अन्त परिवर्तन यदि जोर पनि दोस्रो syllable हुनेछ।
सजिलो सही भेद सम्झना गर्न गर्न, हास्यास्पद अभिव्यक्ति धेरै आविष्कार। उनीहरूसँग धेरै सुविधाजनक र छिटो, आफ्नो बच्चा शब्दहरू सही उच्चारण सिक्न मदत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यो वाक्यांश सम्झना गर्न सजिलो छ: "। एक FIR रूख, कुम्मैत खोसिएर नाङ्गै तल कटौती गर्न"
शब्द को विकल्प colloquial प्रयोग धेरै साधारण छ, र एक लामो समय को लागि कुनै एक शब्द "डक" भूल एक mispronunciation विश्वास गर्दछन्। तर कुरा पोख्त एक मानिस एक सभामा, को खतरा आफ्नो साथी नजान्ने रूपमा ब्रांडेड र आफूलाई को प्रतिष्ठा बर्बाद भइरहेको। तनाव को दुरुपयोग शिक्षकहरू र शिक्षकहरूले लागि बस अस्वीकार्य छ।
कुम्मैत को लाभ बारेमा थोडा
आधुनिक phytotherapy को antiscorbutic र cholagogue रूपमा कुम्मैत प्रयोग गर्दछ। यो पनि कलेजो र पाचन प्रणाली को normalization लागि प्रयोग गरिन्छ। कुम्मैत rheumatism, छाला rashes र cystitis संग मद्दत गर्छ। र ट्रेस तत्व र भिटामिन (विशेष गरी सी) को शरीर को लागि स्रोत, यो बेजोड उल्लेखनीय बोट छ।
तर, हामी धेरै रोगहरु मा contraindicated छ सम्झना गर्नुपर्छ। को बोट मा निहित कारणले बारम्बार प्रयोग कुम्मैत खाना मृगौला पत्थर को गठन गर्न सक्छ ओक्सालिकएसिड को।
को वर्णमाला के हो, यसको अर्थ र इतिहास
"दुई एक प्रकारको": मान phraseologism
मोजा वा मोजा? कसरी: मोजा एक जोडी वा मोजा एक जोडी?
Druzya- "सधैं सँगसँगै" phraseologism मूल्य र मूल कथा
आफ्नो हातले गत्ता को फ्रेम: बनाउन कसरी?
Psoriasis बाट ट्याब्लेटहरू प्रभावकारी र सस्तो हुन्छन्
स्क्रैप सामाग्री बाहिर आफ्नो हातमा एक कचौरा गर्नुहोस्।
कसरी नवजात निद्रामा रात र दिन
Mullein - बिरुवाहरु लागि मल
फ्रान्सेली मिडफिल्डर Blez Matyuidi
रेस्टुरेन्ट (Serpukhov): विवरण, समीक्षा